पहिलो चुम्बन (भाग – ३) – Mero Film
पहिलो चुम्बन (भाग – ३)
उसका दाराले कता कता मेरो ओठमा घोचेको थियो वा उसले जानी जानी घोच्दै थियो थाहा छैन । त्यतिकैमा एक्कासि मेरो ओठ बेस्सरी दुख्यो । मैले आह…गरें, ‘किन चिच्चाको तेसै सबैलाई लाइभ शो देखाउनी होर ?’ उसले हाँस्दै भन्यो । ‘किन टोकेको मेरो ओठ दुख्यो ।‘ मैले अलिकति चिढिएको स्वरमा बोले । यस्लाई टोकेको भन्दैन डल्लु, लभ बाइट भन्छ यस्लाई, तिम्लाई जिन्दगी भरी याद रहन्छ, मैले तिमिलाई गरेको यो पहिलो चुम्बन ।‘ उसले मलाई बेस्सरी अंगाल्दै भन्यो । म उसको छातिमा टाँसिएर मुसुक्क हाँसे मात्र । साच्चै नै यो मेरो पहिलो चुम्बन थियो ।
उसको टोकाई भनुम वा उसले दिएको लभ बाइट सारै मीठो लाग्यो मलाई । एकछिन उ त्यहि बस्यो । मैले चिया पकाए, संगै खायौ । बेलुका उ निस्कियो र आफ्नै कोठामा गयो । घरबाट उसले ल्याएको केहि खाने कुराबाट मलाई पनि अलिकति ल्याईदिएको रैछ ।
यसरी नै मेरा दिनहरु चल्दै थिए । हामी छुट्टी हुदा घुम्न जान्थ्यौ । मेरो रुमको एउटा साचो उ संग पनि थियो, अनि उसको म संग पनि । हामी एक अर्काको घरमा आउने जाने आफ्नै खुसीले हुन्थ्यो । भाउजुलाई सबै थाहा थियो । त्यो मेरो पहिलो चुम्बनमा दारेले दिएको लभ बाइट ले ओठमा सानो घाउ भएको थियो । भाउजुले जिस्काउदै थिईन ‘के भो ?’ भनेर । अनि त्यसैमा थप्न दारे आफै आईपुग्थ्यो । जानी जानी भाउजू संग मिलेर मलाई जिस्काउदै थियो । मैले’नि भन्दिए, ‘यहि बाहुनले टोक्देको हो भाउजू’, । अनि दारे लाजले हामीसँग बस्न नसकेर गयो । म र भाउजु हस्यौ । पछि मलाई फोनमा कराउदै थियो ‘के भनेको भाउजू लाई’, मैले नि भने ‘आफुले जिस्क्याउदा चाहिं केही नहुनी है ?’
कयौ रात वल्लो घर र पल्लो घर नसुती कुरा गरेर बस्थेयौ हामी । एक पटक म अचानक बिरामी परें । अफिसबाट आउँदा पानीले भिजाएको थियो त्यसैको उपज थियो सायद म बिरामी परे । दारेलाई प्राक्टिकलको लागि कलेजले बाहिर लिएर गएको थियो । दुई दिन पछि मात्र आउछु होला भन्थ्यो । पानीमा भिज्नु मेरो लागि पहिले बाटै राम्रो थिएन । पहिले’नि धेरै बेर नुहाउदा सानो तिनो रुघा खोकीमा परेकी थिएँ । त्यो बेला दारेले धेरै गाली गर्यो । ‘बिरामी हुँदा’नी गाली गर्छौ’ भन्दै रिसाएर फोन राखें मैले । रिसाउनु त बस एउटा बहाना थियो उसलाई सताउने । कति धेरै माया गर्थ्यो उ मलाई । ८/९ महिना भैसकेको थियो हाम्रो मायाले जन्म लिएको तर आज सम्म उ म संग रिसाएर नबोलेको थिएन । बरु म कहिले काहीँ रिसाएर नबोले झै गर्थे, उ फकाउन आउथ्यो । यो पटक नि त्यस्तै गरे । अहिले आफैले फकाउछ फोन गरेर सोचेर मैले फोन काटें । निकै बेर कुरे तर उसको फोन आएन । मलाई कता कता नराम्रो लाग्यो, किन उसको फोन आएन भनेर । आफैले गर्न खोज्दा मनले मानेन, सधै उसले देखाउने व्यवहारले मन भरी आशा थियो । निकै बेर सम्म कुर्दा’नि उसको फोन आएन । मन दुखेर आयो कता कता । एक त बिरामी थिए । अफिस जान सक्दिन भनेर आजै छुट्टी लिएकी थिए । घरी घरी टाईम हेर्थे । रातिको ११:२२ भएको रै’छ त्यति बेला । उसको फोन नआउदा एक्कासि उसको मन बदलियो कि जस्तो पनि लाग्यो । रुँदै थिएँ निदाएको पत्तै पाईन । म त मस्त निन्द्रामा डुबेकी थिए, कता कता मेरो निधार, टाउको तिर कसैले सुम्सुमाएको जस्तो लाग्यो । मन आत्तियो । डर लागेर आयो । तर हेर्नू त पर्थ्यो के हो भनेर । म सिरानी मुनि सधै छुरी राखेर सुत्थे । बिस्तारै एउटा हातले छुरी निकाले र बिस्तारै आँखा खोले । मैले बत्ती निभाएर सुतेकी थिए, अहिले बत्ती बलेको रैछ । म जुरुक्क उठेर अगाडि छुरी तेर्साउदै अलिकती पछि हटे । आँखा राम्ररी खोलेर हेरें । सपना कि बिपना पत्त्याउनै सकिन । मेरो त दारे पो रै’छ । ‘ओई’, उ आत्तिदै उठ्यो । के गरेको ?’ उसैले सोध्यो।
‘तिमी कैले आको ? बाहिर छु भन्थ्यौ ? अनि यसरी केही नबोली राती अर्काको कोठामा किन आको ?’ मैले रातिको रिस पोख्दै भने । घडीमा समय हेरें, २:१५ भएको रै’छ । उ मेरो नजिकै आएर बस्यो अनि अरु केही नबोली मेरो निधारमा चुम्बन गर्यो । मेरो हातको छुरी खोसेर अलिक परको टेबुलमा राख्यो । म उसलाई हेर्दै थिएँ, उसले नि मलाई हेर्यो, मौनता थियो । उसले मलाई हेर्दा मैले मेरा मुन्टो बटारे । ‘के भो ?’ उसले सोध्यो । ‘आफू’चै राती राती कहाँ देखि आईराछु आफ्नो डल्ली बिरामी छ भनेर, उ चै यसरी रिसाएर बस्छ ।‘ उसले मेरो हात समाउदै भन्यो । मैले हात फट्कारे अनि ‘म रिसाको छु बोल्दिन’ भनेर म आफ्नै ठाउँमा खाटमा पल्टिएँ । ‘लौ अब बोल्दिन भन्नी मान्छेको कोठामा के बस्नु गए म…’ उ खाटबाट उठ्दै भन्यो । मनले नगैदिए हुन्थ्यो जस्तो लाईराको थियो । तर उठेर हेरिन । ढोकामा खत्र्याक खुत्रुक्क गरेको सुने । हत्तपत्त उठेर हेरे, उ त्यहि रैछ । दारेले मेरो चोरी पक्डियो, उ मज्जाले हाँस्यो, हाँसो मेरो नि रोकिएन म नि हासे । उ बत्ती निभाएर मै संग बेडमा आयो । संगै पल्टियौ बेडमा । ‘खुब सताउछौ है मलाई’, उसले छातिमा टाँस्दै सोध्यो । म हाँसे मात्र । म जोरोले तातेकी थिएँ । ‘कति हट भ’को मेरी डल्लु आज’ फेरि उसले भन्यो । म फेरि पनि केही बोलिन । ‘के भयो किन नबोलेको ?’ उ बाट अर्को प्रश्न आयो । उ अरु केही बोल्न खोज्दै थियो । मैले उसको ओठ आफ्नो ओठले बन्द गर्दिए । उ अलिकति सिरानीबाट उठ्यो । पहिले पहिलेको किस भन्दा अलिकति वाइल्ड थियो यो किस । उसको हातहरु मेरो शरीरमा सल्बलाउन थाल्यो । पहिलो पटक उसले मेरो छातीमा हाल लगायो । मैले प्रतिकार’नि गर्न चाहिन । उसका हातहरु खेल्दै थिए । आफ्नो ओठ म बाट छुटाउदै उसले भन्यो- ‘आज यो भन्दा धेरै नजानी, तिमिलाई सन्चो छैन गाह्रो हुन्छ तिमिलाई’ । उसको हात मेरो इनर भन्दा भित्रै थिए, मैले केही बोलिन हाँसे मात्र…त्यो रात चुम्बनहरु मै बित्यो…
२०७६ माघ २५ गते ७:२४ मा प्रकाशित